Ikhabhinethi kwiiNtaba eziMhlophe
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCourtney
Ikhabhathi ePristine ibekwe kwiiNtaba eziMhlophe ezingqongwe yindalo kunye nokuzola, kodwa iseyimizuzu engama-20 kuphela ukusuka edolophini eMantla eConway kwiivenkile zokutyela kunye neeresityu. Yonwabela ixesha ngalinye iNew England kufuneka ibonelele ngokufikelela ngokusondeleyo kuMlambo iSaco, amachibi, iintaba zokutyibilika ekhephini kunye nokuhamba intaba kuzo zonke izakhono.
I-WiFi iyafumaneka ngendawo yokusebenzela echongiweyo kwigumbi eliphezulu. Ikhabhinethi inika indawo yokupaka eyaneleyo kuzo zonke iindwendwe, kodwa inokufuna iimoto ze-4WD kwiinyanga zasebusika.
Ikhabhathi ineebhedi ezi-3 zokumkanikazi, igumbi elinye labucala elikumgangatho wokuqala. Iibhedi ezimbini zookumkanikazi kwindawo evulekileyo yomgangatho ophezulu. Amagumbi okuhlambela agcweleyo abekwe kuyo yomibini imigangatho.
Ngokuqinisekileyo akukho matheko okanye izilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo. Abamelwane bakufutshane kwaye kukho iikhamera zangaphandle ezimiselwe ukhuseleko olongezelelweyo. Yonke inkunkuma kunye nokurisayikilisha kufuneka kususwe kwindawo yeendwendwe njengoko singenazo iinkonzo zokuthatha inkunkuma. Imililo yenkampu ayivumelekanga ngaphandle kokuba imvume efanelekileyo ifunyenwe kwiDolophu yaseChatham. Ivolontiya yoMlilo uMarshall uhlala ecaleni komnyango ngoko ke nceda ube nentlonipho kwaye ukhusele iHlathi leSizwe.
Jonga iSherman Farm kuphela yimizuzu eli-10 ezantsi kwendlela ukuze ufumane imveliso entsha kunye nezinto ezifumaneka ekuhlaleni. Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, unokufuya iibhokhwe zeentsana, ukhenkethe imaze yombona okanye ukhethe iintyatyambo zasendle.
Ukunyuka intaba: I-Blackcap trailhead yindlela ekhawulezayo yokuqhuba kunye nokufikelela ngeNdlela yeNkanyamba yeNtaba (yexesha lonyaka). I-Emerald Pools kunye ne-Baldface Trailhead nazo ziindawo ezidumileyo.
Iindawo zokutyela: Zama i-302 Smokehouse eFryeburg, eMaine nase-Ebenezer's eLovell, eMaine edume nge-ales yase-Belgian, iBhali neTyuwa, i-Delaney's Hole eDongeni.
Iindawo zokuthengisa utywala: iSaco River Brewery, iTuckerman's, iCathedral Ledge
Iindawo ekuchithelwa kuzo i-Ski ezikufutshane: Cranmore, Attitash, WIldcat, Shawnee Peak
Asizukubakho xa ufika, kodwa sinayo ibhokisi yokutshixa kwaye ikhowudi siza kuyinikwa emva kogcino oluqinisekisiweyo. Sisoloko sifumaneka ngokuthumela imiyalezo, nangona kunjalo.